खोप लगाउनेको संख्या सरकारको लक्ष्यभन्दा कम, दुई दिन समय थपियो
सरकारले पहिलो चरणमा कोरोनाविरुद्धको खोप ४ लाख ३० हजारलाई लगाउने घोषणा गरेको थियो । तर, लक्ष्यअनुसार खोप लगाउनेको संख्या कम देखिएको छ ।
शनिबारसम्म स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार २ सय २६ खोप केन्द्रबाट ३ लाख ८३ हजार ३ सय ९८ जनाले खोप लगाएका छन् ।
खोप लगाउन दुई दिन थप
खोप लगाउनेको संख्या कम भएपछि सरकारले थप दुई दिन समय थप गरेको छ । पहिलो चरणको खोप अभियान ८ फागुनसम्मका लागि तोकिएको थियो ।
‘खोप अभियानको समय दुई दिन थप गरेका छौं’, स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीरकुमार अधिकारीले भने, ‘हामीले टार्गेट नै बढी बनायौं । मान्छेको बुझाइ पनि फरक-फरक भयो । समय अनुसार बुझ्दै जान्छन् ।’
खोप शाखाका प्रमुख डा. झलक गौतम खोप लगाउन जिल्ला सदरमुकाम आउनु परेकाले संख्या कम देखिएको बताउँछन् ।
‘पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीलाई लगाउँदाको कभरेज हेर्दा ८६ प्रतिशत देखिएको छ । पहिलो चरणकै दोस्रो समयमा ७५ प्रतिशत भएको छ’, डा. गौतमले भने, ‘खोप केन्द्र जिल्ला सदरमुकाममा भएकाले पनि कम भएको हो ।’
अर्कोतर्फ दुई डोज नै पूरा गर्ने टार्गेट भएकाले संख्या कम भएको उनी बताउँछन् । ‘दुई डोज नै पूरा गर्ने टार्गेट भएकाले पनि संख्या कम भएको हो’, उनले भने, ‘अब दोस्रो डोज खोप पहिलो मात्रा लगाएको ८ हप्तापछि लगाउन सुरु गर्छौं ।’
बढाइँदै खोपको दायरा
सरकारले खरिद गरेको २० लाख डोज खोपमध्ये १० लाख डोज खोप आइतबार काठमाडौं आइपुगेको छ ।
अक्सफर्ड युनिभर्सिटी र औषधि उत्पादक कम्पनी आस्ट्राजेनेकाले संयुक्त रूपमा विकसित गरेको ‘कोभिशिल्ड’ खोप सरकारले ल्याएको हो । सरकारले प्रतिखोप ४ डलरका दरले २० लाख डोज खोप खरिद गरेको हो । यसअघि यही खोप भारतले १० लाख डोज उपलब्ध गराएको हो ।
खरिद गरेको खोप आइपुगेकाले अब खोप लगाउनेको संख्या बढ्ने सरकारको विश्वास छ । ‘खरिद गरेको २० लाख डोजमध्ये १० लाख डोज खोप आइपुगेको छ’, डा. गौतमले भने, ‘अब खोपको दायरा पनि बढाउँछौं ।’
देशव्यापी खोप, ५५ वर्षमाथिका प्राथमिकतामा
सरकारले अब समुदायस्तरमा नै खोप लगाउने भएको छ । २३ फागुनदेखि दोस्रो चरणको खोप अभियान सुरु हुँदैछ ।
पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, सफाइकर्मी, सुरक्षाकर्मी, एम्बुलेन्स र शवबाहन चालक, पत्रकार, कर्मचारी लगायत फ्रन्टलाइनमा काम गर्नेलाई लगाइएको थियो ।
दोस्रो चरणमा खोप अभियानलाई देशव्यापी बनाइने खोप शाखा प्रमुख डा. गौतमले बताए । ‘अब दोस्रो प्राथमिकतामा देशव्यापी जान्छौं’, उनले भने, ‘५५ वर्षभन्दा माथिकालाई लगाउने हो ।’
दोस्रो चरणमा करिब २७ लाख जेष्ठ नागरिकलाई खोप लगाउने सरकारको लक्ष्य छ ।
पालिकामा खोप केन्द्र
पहिलो चरणको अभियानमा जिल्लामा खोप केन्द्र हुँदा खोप लगाउनेको संख्या कम भएपछि दोस्रो अभियानमा पालिका-पालिकामा खोप केन्द्र राखिने भएको छ । जेष्ठ नागरिकलाई मध्यनजर गरेर खोप केन्द्र पालिकामा राख्न लागिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।
‘अब स्वास्थ्य संस्था र नियमित लगाइने खोप केन्द्रबाट पनि लगाइन्छ’, डा. गौतमले भने, ‘कहाँ केन्द्र राख्ने हो त्यो जिल्लाहरूले निर्धारण गर्छन् । पहिलो चरणको भन्दा धेरै केन्द्र तोकिन्छ ।’
कसले लगाउने मिल्छ, कसले मिल्दैन ?
१८ वर्ष मुनिका बालबालिका, गर्भवती महिला, सिकिस्त बिरामी भएकाले भने खोप लगाउन मिल्दैन । यसअघि स्तानपान गराइरहेका आमाहरूले पनि खोप लगाउन मिल्ने भनिएको थियो । तर, विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्तानपान गराइरहेका आमाहरूले पनि खोप लगाउन मिल्ने बताएको छ ।
‘अब स्तानपान गराइरहेकी आमाले पनि खोप लगाउन मिल्छ’, स्वास्थ्य मन्त्रालका खोप विज्ञ समितिका संयोजक डा. श्यामराज उप्रेतीले भने, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्तनापान गराइरहेका आमाले पनि खोप लगाउन मिल्ने सिफारिस गरेको छ ।’
खोपको प्रभावकारिता कति ?
कोभिशिल्ड खोपको प्रभावकारिता ७० प्रतिशत देखिएको छ । विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबट खोपको प्रभावकारिता ७० प्रतिशत देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ छ ।
२–८ डिग्री सेल्सीअस तापक्रममा सुरक्षित राख्न मिल्ने कोभिसिल्ड खोपको प्रभावकारिता राम्रो भएकाले ढुक्कसँग लगाउन विज्ञहरूले पनि आग्रह गर्दै आएका छन् ।
‘यो खोप १६ वटा देशमा प्रयोग भइरहेको छ’, डा. गौतमले भने, ‘प्रभावकारिता राम्रो देखिएको छ । ढुक्क भएर खोप लगाउन आग्रह गर्दछु ।’
यो पनि : खोपले कसरी काम गर्छ ?
प्रकाशित मिति: आईतबार, फागुन ९, २०७७, १६:४५:००